Qaar ka mid ah Golaha Wasiirrada Soomaaliya oo shir uga warbixiyey qorshe howleedkooda – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Muqdisho – Mareeg.com: Golaha Wasiirada Soomaaliya ayaa shirkoodii caadiga ahaa ku yeeshay magaalada Muqdisho, waxaana shirkan looga hadlay arrimo badan oo quseeya xaalada dalka, iyadoo Wasaaradaha Xukuumada ay soo gudbiyeen qorshe howleedkooda.
Shirka Golaha Wasiirada oo uu shir gudoominayay Ku simaha Ra’iisul Wasaaraha ahna Wasiirka Garsoorka iyo Dastuurka Faarax Sheekh C/qaadir ayaa ugu horeyn warbixino ka soo jeediyay qaar ka mid ah Wasiirada oo soo gudbiyay qorshe howleedkooda.
Sidoo kale waxaa shirka waxaa wasaarada Maaliyada ay soo bandhigtay qaabkii canshuuraadka berriga loo qaadi lahaa, waxaana dood dheer kadib la isla gartay in dib loogu celiyo, si mar kale Goluhu uga sii doodo, una ansixiyo.
Wasaarada Shaqada iyo shaqaalaha ayaa soo bandhigtay tirada shaqaalaha rayidka, waxaana qaar ka mid ah wasaaradaha ay soo jeediyeen in tirade shaqaalaha wasaaradaha u diiwaan geshan ay aad u tira badan yihiin, ayna soo shaqo tagto tiro aad u yar.
Goluhu ayaa waxaa uu kaloo guda galay ka doodista xaaladihii amniga dalka, waxaana uu bogaadiyay howl galada ciidamada amnigu wadaan iyo dadaalada lagu xasiliyo dalka oo meel wanaagsan maraya.
Ugu dambeyn, Ku simaha Ra’iisul Wasaaraha ahna Wasiirka Garsoorka iyo Dastuurka Faarax C/qaadir ayaa soo jeediyay in qorshe howleedka ay soo bandhigeen wasaarada loo saaro gudi farsamo oo ka tirsan Xafiiska Ra’iisul Wasaaraha, si ay isku waafajiyaan qorshihii xukuumada ee uu Ra’iisul Wasaaraha ka horjeediyay Baarlamaanka.
DEG-DEG: Qaraxyo iyo rasaas xoog leh oo ka dhacday afaafka hore ee Villa Somalia